शिल्पाले यसरी खोलिन् छविको अत्याचार - samayapost.com
शिल्पाले यसरी खोलिन् छविको अत्याचार
समयपोष्ट २०७६ असार २७ गते १३:४१
अर्को ठाउँमा जाँदा शंका गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले म त्यही ठाउँमा जान थालेँ। म्यानेजरले नदेखेको बेला पनि म आफैँ ‘सर के छ हालखबर?’ भन्दै बोलाउन जान्थेँ। ताकी भोलि छवीजीले शंका गर्ने बाटो नहोस् भनेर। तर, पनि उहाँले शंका गर्न छाड्नुभएन।बिहे गरेको एक महिनापछि उहाँको कस्तो–कस्तो रुप देखियो। त्यो त मलाई बाहेक कसलाई थाहा होला?
मलाई धेरैअघिदेखि गरिएको व्यवहार घरेलु हिंसा हो, यस्तो गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि थिएन। कानुन छ, कानुनले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि लाग्यो, ‘यो मान्छे सम्मान थाप्न लायकको हो र?’भोलि मजस्तै धेरै युवती यसरी प्रताडित हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले म कानुनको शरणमा जानुपर्छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय उजुरी दिन गएँ।
उहाँको दोश्रो श्रीमती गीताञ्जली सुनुवारबारे सबैलाई थाहै छ। उहाँ त पूरै डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुभएको होला। अझ रेखा थापाबारे त थाहा नहुने को होला? उहाँसँग छुटिसकेपछि उहाँबाट पिल्सिएका कुरा रेखा दिदीले बाहिर ल्याउनुभएकै हो।तर, उहाँले छुट्टिनुअघि पिल्सिँदै गरेको अवस्थामै कानुनको शरणमा पुग्नुभएको भए आज मैले यस्तो दुःख पाउँदिनँ थिएँ कि जस्तो लाग्छ।
बिहेअघि उहाँ मलाई ‘म्यूजिक भिडियो नगर्नू’ भन्नुहुन्थ्यो। तर बिहेपछि ‘आफ्नो खर्च जुटाउनका लागि गर्नू’ भन्नुभयो। किनभने उहाँले मलाई एक पैसा पनि खर्च दिनुहुन्नथ्यो। घरको आधा खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्थ्यो। मैले म्यूजिक भिडियो नै गरिनँ भने मलाई खान मन लागेको, लाउन मन लागेको कुरा कहाँबाट ल्याउने? समस्या हुन्थ्यो। त्यसैले म आफैं कमाउँथे। नेपाल लाइभका लागि अनिल यादवले लेखेका छन्